किमले ट्रम्पलाई बताएका थिए आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो रहस्य, के थियो त्यो रहस्य ? – " सुलभ खबर "
किमले ट्रम्पलाई बताएका थिए आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो रहस्य, के थियो त्यो रहस्य ?
काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोंग उनका विषयमा पत्रकार बब उडवर्डले आफ्नो किताब ‘रेज’मा कैयौं खुलासा गरेका छन् । यो किताबमा ट्रम्पको उत्तर कोरियाली नेता किमका बारेमा सोच र अमेरिकी सेनाको एक रहस्यमय हतियारसहित कैयौं जानकारीको खुलासा गरिएको छ । किताबमा उडवर्डले लेखेका छन् ‘टम्पले जब उत्तर कोरियाली शासक किम जों उनलाई २०१८ मा सिंगापुरमा भेटेका थिए त्यसपछि ट्रम्प किमबाट निकै प्रभावित भएका थिए । ट्रम्पका अनुसार किम निकै तीक्ष्ण सोचका थिए।
समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार ट्रम्पले भनेका थिए कि किम जोंग उनले आफूलाई सबै कुरा बताउँथे । किमले ट्रम्पसँग यतिसम्म बताएका थिए कि उनले आफ्ना काकाको हत्या गसरी गरेका थिए । ट्रम्प चाहन्थे कि किमलाई आफ्नो परमाणु कार्यक्रम बन्द गर्नको लागि मनाउन सकुन् तर उनको प्रयास सफल भएन । त्यतिबेला ट्रम्पले किम परमाणु हतियारका विषयमा अमेरिकाको कुरा मान्न तयार नहुने इन्टेलिजेन्स अधिकारीको अनुमानलाई खारेज गरेका थिए । ट्रम्पले किताबका लेखक उडवर्डसँग भनेका थिए कि सीआइएलाई उत्तर कोरियासँग कसरी डील गर्ने भन्ने थाहै छैन ।
ट्रम्पले किम जोंग उनसँग भेटका विषयमा भएका आफ्नो आलोचना पनि खारेज गरे । ट्रम्पले यो वार्ता कुनै ठूलो कुरा नभएको दावी गर्दै भनेका थिए ‘भेटमा मेरो केवल २ दिन खर्च भयो । मैले केही गुमाउनु परेन ।’ ट्रम्पले उत्तर कोरियाको परमाणु हतियारप्रति लगावलाई एक उदाहरण दिँदै भनेका थिए यो त्यस्तै हो जस्तो कसैले आफ्नो घरलाई निकै माया गर्छ र बेच्न चाहँदैन । ट्रम्पका आलोचकहरुले भने ट्रम्पले किमसँग भेटेर उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मान्यता दिलाएको बताउने गरेका छन् ।
किम जोंग उन र ट्रम्पबीच पत्रमा पनि कैयौं कुरा भएका थिए । पत्रमा ट्रम्पले किमलाई ‘योर एक्सिलेन्सी’ सम्बोधन गरेका थिए । किमले ट्रम्पलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन् – हाम्रो बीचमा गहिरो र खास मित्रता एउटा जादूइ शक्तिले जस्तै काम गर्नेछ । उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच तनावलाई लिएर ट्रम्पले उडवर्डसँग भनेका थिए ‘मैले एउटा यस्तो परमाणु हतियार बनाएको छु जो कुनै देशसँग छैन । हामीसँग एउटा यस्तो चीज छ जसलाई न तपाइँले कहिल्यै देख्नुभएको होला न त्यसको बारेमा सुन्नुभएको होला । हामीसँग यस्तो हतियार छ जसको बारेमा न रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन न चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिंगले पहिले कहिल्यै सुनेका होलान् । हामीसँग यस्तो केही छ जो अविश्वसनीय छ ।’
उडवर्डले किताबमा लेखेका छन् – एक सूत्रले नाम नलेख्ने शर्तमा उनीसँग यो कुराको पुष्टि गरेका थिए कि अमेरिकी सेनासँग एउटा नयाँ हतियार प्रणाली छ । यद्यपि सूत्रले यसको बारेमा धेरै जानकारी दिएनन् । सूत्रले उडवर्डसँग भने कि उनी आश्चर्यचकित छन् कि ट्रम्पले स्वयं यसको बारेमा खलासा गरे । ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रबर्ट ओब्रायनले फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै बुधबार राष्ट्रपतिले कुनै खास हतियार प्रणालीबारे कुरा नगरेको बताएका छन् । यद्यपि उनले आफुहरुले सधैं कुनै न कुनै खोज गरिरहने र यसबारे दुश्मनलाई थाहा नहुने बताए ।